Indlu enomtsalane eyi-2BR kwisakhiwo esinembali - I-Airbnb
Indlu enomtsalane eyi-2BR kwisakhiwo esinembali
Eli khaya libukekayo lihleli kumgangatho osezantsi wendlu yamatye ehlaziyiweyo ekwindawo ephakathi kwidolophana yenkulungwane ye-16 yaseVinho kwipaki entle yendalo yeSerra da Estrela.
Le ndlu, epheleleyo kunye negadi yabucala ene-BBQ, ihonjiswe ngesitayile kwaye inomtsalane kuyo yonke into onokuyifuna ngexesha leholide yakho. Yindawo nje entle yokubuka imbali , ukunyuka intaba, iwayini, ukutya kunye namalwandle omlambo eSerra da Estrela
Indawo yakho inendawo yokuhlala / yokutyela enamagumbi aliqela. Ikhitshi elinento yonke liquka ifriji enkulu, ioveni, i-hob, i-microwave, umatshini wokwenza ikofu nayo yonke into oyidingayo ukuze upheke ukutya okumnandi.
Yonwabela iindawo zokuhlala ezitofotofo ezininzi kunye ne-smart TV enezikrini eziyisicaba.
Igadi yabucala enendawo yokubraya nesetingi epheleleyo yokutyela phandle ilungele iziselo okanye indawo yokutyela kwiinyanga ezifudumeleyo.
Igumbi lakho lokulala lokuqala linebhedi elala abantu ababini etofotofo (i-140x200cm) ngelixa igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye.
Zombini amagumbi okulala anendawo evulekileyo nebethwa ngumoya ibe zombini iibhedi zenziwe ngezinto zebhedi ezisemgangathweni.
Igumbi lakho lokuhlambela lineshawa enendawo yokuhlamba umzimba ne-shampoo.
IVinho ngenye yeedolophana ezininzi ezinembali kwiintaba eziphakamileyo zasePortugal. Imizuzu elishumi ukusuka kwisixeko esihle saseGouveia esinembali etyebileyo nemizuzu engamashumi amabini ukusuka kwisixeko saseSeia.
Kukho uhambo oluhle kakhulu lwelizwe, iindlela zaseRoma kunye neebhulorho, ubuncwane bezakhiwo kunye nokutya okusemagqabini kunye newayini apho le ngingqi yaziwa kakhulu kuquka itshizi edumileyo yaseSerra da Estrela.
Ivenkile yokutyela / ibhari, ivenkile yokubhaka kunye nemarike encinci ziimitha ezilishumi ukusuka emnyango wakho ezinento yonke oyifunayo kuquka isonka esitsha esibhakwe apha kwilali eneoveni zeenkuni.
Indawo yokutyela esemagqabini yaseMadre de Agua yindawo ekulula ukuhamba kuyo okanye uhambe ngebhayisekile yethu entsha ethi " Uzive".
Iphuli yokuqubha nebhari ebudeni beenyanga zehlobo ikumgama wemizuzu emihlanu xa uhamba ngeenyawo njengoko iyicawa emangalisayo yenkulungwane ye-16.
Indawo eyingqongileyo ineevenkile zokutyela ezininzi eziqhelekileyo ezikumgama omfutshane ngemoto kwaye kukho iivenkile ezinkulu zeLidl neIntermarche ezikwiikhilomitha ezimbini.
Indawo yokutyibiliza emkhenkceni yasePortugal yimizuzu eyi-40 xa uqhuba.
I-Vinho ikumgama weeyure ezintathu ukusuka eLisbon, iiyure ezine ukusuka eMadrid neeyure ezimbini ukusuka ePorto naseSalamanca. I-Coimbra yimizuzu engamashumi asithoba xa uqhuba.
Kukho iinkonzo ezintle zololiwe nezebhasi.
Inombolo yomthetho: 9626